सेनाले खोल्यो कालापानी जाने घोरेटो बाटोको ट्र्याक,गर्यो सेनाले ठूलो का’म तर किन हुन सकेन ज’ग्गा फिर्ता? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
सेनाले खोल्यो कालापानी जाने घोरेटो बाटोको ट्र्याक,गर्यो सेनाले ठूलो का’म तर किन हुन सकेन ज’ग्गा फिर्ता?
१० आश्विन २०७७, शनिबार दार्चुला। नेपाली सेनाले व्यासको घाँटीबगर इलाकामा कडा चट्टान रहेको भिरमा घोरेटो बाटोको ट्र्याक खुलाएको छ। गत जेठ ९ गतेदेखि काम शुरु गरेको सेनाले ५५० मिटर बाटोको ट्र्याक खुलाएको हो।
भारतले सडक नि’र्माणका क्रममा घाँटीबगर क्षेत्रमा बाटो अ’वरुद्ध हुँदा व्यास गाउँपालिकाको वडा नं १ छांगरु र तिंकरका बासिन्दालाई आव’तजावत ग’र्न स’मस्या भएपछि सेनाले बाटो खोल्ने जिम्मा पाएको थियो। चार महिना बढी समय लगाएर सेनाले अप्ठ्यारो ठा’उँमा बाटोको ट्र्याक खुलाएको हो।
मौसम प्रतिकुल नहुनु, कडा चट्टानी भूगोल र सामान ढुवानीमै समय लागेका कारण ट्र्याक खुलाउने काम ढिलाइ भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए। “भिर फु’टाएर ट्र्याक खुलाइएको छ”, उनले भने, “सफाइ गर्ने काम एक दुई दिनभित्र सकिन्छ।
” यो बाटो खुलेसँगै व्यासका बासिन्दालाई जो’खिमपूर्ण मानिएको क्षेत्रमा बाटो सहज भएको छ। व्यासको छांगरु र तिंकरका बासिन्दा कार्तिक महिनामा सदरमुकाम खलंगा कुञ्चा झ’र्ने गर्छन्। व्या’सको छां’गरुमा ११७ र तिंकरमा ८७ घरधुरीको बसोबास छ।
चट्टानी भूगोलले केहि ढिलाइ भए पनि स्थानीयका लागि सहजरुपमा आवतजावत गर्न मिल्ने गरी बाटो निर्माण भएको व्यास–२ का बासिन्दा हरकसिंह कार्कीले बताए। घाँटीबगरमा सेनाले बनाएको बाटोमा ट्र्याक राम्रो खुलेको र त्यो बाहेकका अन्य चार पाँच ठाउँमा पुनः बाटो अ’वरुद्ध भएको उनले बताए।
घाँटीबगरमा सेना बसेको क्याम्पको तल ठूलो पहिरो गएको छ। त्यो क्षेत्रमा पनि आवतजावत गर्न नि’कै सास्ती भएको व्यासको तिंकर पुगेर ख’लंगा फर्किएका कार्कीले जानकारी दिए। तलतिरको बाटो नखुला’एसम्म अहिले नै व्यासी कुञ्चा सर्न सक्दैनन्।
तम्बाकुमा व्यास गाउँपालिकाको बजेटमार्फत बाटो खुलाउने काम भए पनि कडा चट्टानी भाग भएका कारण खुल्ने सम्भावना छैन्। यो क्षेत्रमा अहिले पनि तारको सहारामा चट्टानी भूभागमार्फत नदी पार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै तम्बाकु नजिकको नयाँ निर्माण गरिएको बाटो सबै भ’त्किएको छ।
कल्जुगाडमा झोलुंगे पूल बगा’एको छ भने कल्जगाड भन्दा तल र माथि बाटो भत्किएको छ। सबै ठाउँमा बाटो निर्माण गर्न सके मात्र सहजरुपमा व्या’ससम्मको बाटो खुल्ने उनले बताए। त’म्बाकु भन्दा तलतिर बाटो नहुँदा व्यासबाट फर्किने भे’डा व्यवसायी अहिले बु’दिमै रो’किएका छन्।
घोरेटो बाटो खुलाएको सेनाले लगत्तै सडक निर्माणको काम पनि थालनी गर्नेगरी तयारी भइरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता पौडेलले बताए। सेनाले दुई ठाउँमा क्याम्प राखेर सडक निर्माणको थालनी गर्ने उनले जानकारी दिए। उनले भने, “अहिले प’रामर्शदातामार्फत अध्ययन भइरहेको छ।”
सो सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले विस्तृत आयोजना प्र’तिवेदन (डीपीआर) को काम शुरु गरेको छ। सैनिक मुख्यालयका अनुसार मोटर बाटोको डीपीआर तयार पार्न विकास नि’र्माण ग’णबाट प्रमुख से’नानी रमेश गुरुङ्गको ने’तृत्वमा सैनिक टो’ली गत साउन २३ गतेदेखि सदरमुकाम ख’लंगामा छ।
महाकाली नदी किनारै किनार भएर सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताइएको छ। सडक निर्माण गर्न सके व्यासीको सपना पूरा हुने स्थानीयवासी बताउँछन्। यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनको नि’कै सम्भावना छ। कैलाश पर्वत दर्शन, चीन सँगको व्यापार, अपिहिमाल लगायतका थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्र यस क्षेत्रमा पर्छन्।
“अहिले बाटो नहुँदा छांगरु र तिंकरका बासिन्दा सदरमुकाम खलंगा आउन पाएका छैनन्, सदरमुकाममा रहेका त्यहाँका मानिस पनि गाउँ फर्किन पाएका छैनन्, चाँडो बाटो निर्माण भयो भने स्थानीयवासीलाई आफ्नै भूमि भएर गाउँ जान सहज हुन्छ”, व्यास–१ का बासिन्दा जगदीशप्रताप ऐतवालले भने।
सरकारले भारतले अ’तिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूगोल स’मेटेर नक्सा जारी गरेपछि यहाँका बासिन्दा पनि नेपालकै भूमि भएर आवत–जावत गर्न पाए भन्नेमा छन्।
व्यासीहरु हरेक वर्ष छ महिना व्यास र छ महिना सदरमुकाम खलंगा बस्ने गर्छन्। अहिले व्यासको छांगरुमा सशस्त्र प्रहरीको गु’ल्मसमेत बसेको छ। बाटो नभएकै कारण सशस्त्र प्रहरीले नेपालकै बाटो भएर खाद्यान्न ढु’वानी गर्न हेलिकप्टर कु’र्नुपरेको छ।
Previous वर्तमान सरकार कुरामा भन्दा काममा वि’श्वास गर्छः मन्त्री ढकाल,तपाईलाई य’स्तै हो जस्तो लाग्छ त?
Next तत्काल विद्यालय नखोल्नुस् भन्दै शिक्षामन्त्री पोख्रेलले सबैलाई यसरी आ’देश दिए , हेर्नुहोस।